That's so good, right?: July 2008
The Long Hard Drive (2)
ကုန်းပြ၊သူ့ချစ်စရာအပေါက်လေးကို ဖွင့်ဟပြလိုက်လုပ်ပြီး မြှူဆွယ်နေတဲ့ Dannyကျွန်တော့်ဘက် ကိုမျက်နှာမူလာမှ မိမိသာစိတ်လှုပ်ရှားနေတာမဟုတ် သူပါထကြွနေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ ကောင်ကလေးရဲ့ပေါင်ကြားမှာ တဒိတ်ဒိတ်နေအောင် ခေါင်းငြိမ့်ပြနေတဲ့ တောင့်တင်းလှတဲ့လှံတံထွားထွား ကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ပါ။ မြင်ဖူးခဲ့တဲ့လီးထဲမှာတော့ most perfect mushroom-shaped cock head ရှိတဲ့ဟာပါပဲ။ သူ့ဟာကိုမြင်ရတာ စိတ်ထဲမီးတောင်ထကြွလာသလို ပါးစပ်ထဲကသွားရည်များတောင် ယိုလာမိသလိုဖြစ်လာပါတယ်။
“You can play with it if you want.” လို့ပြောပြီးကျွန်တော့်ပေါင်နဲ့မထိတထိလုပ်လိုက် ခွဆုံကိုလက်ဖ၀ါး နုနုနဲ့လှမ်းပွတ်လိုက် ဒူးပေါ်ကို သူ့ဖင်ဝနဲ့ထိပြီးထိုင်ချလိုက်လုပ်နေတော့ မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ သူ့လီးကိုလက်နဲ့ လှမ်းပြီးဆုပ်ကိုင်ကစားမိတော့တယ်။ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာပဲ အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးအဖြစ်တွေ့ရသလို အထာကျွမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း သူ့အသံအမူအယာက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ထင်မြင်လာ မိတာအမှန်။
“နေပါဦးကွာ မင်းဟာနဲ့ကစားချင်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုဘာကြောင့်ထင်ရတာလည်း” ပြောမိပြန်တော့” အစ်ကိုဒါကိုလိုချင်တယ်လို့ ထင်မိလို့ပေါ့ဗျာ”တဲ့ ကြောက်စရာတောင်ကောင်းလာပြီ သူ့အသံနားထောင်ရတာ။ သူစိုးရိမ်စိတ်ရှိနေသလို စိတ်လည်းရှုပ်နေတဲ့ဟန်နဲ့ပြီးတော့ လူတစ်ယောက်အကူအညီကို ဒီအတိုင်းယူရမှာ ဒါမှမဟုတ်......။ “ကျွန်တော့်ကို ကူညီတာတွေအတွက်ပြန်ပေးချင်လို့ပါ။”
“မလိုပါဘူးကွ ဒါကိုရချင်လို့ကူညီခဲ့တာလည်းမဟုတ်၊အဲဒါအတွက်တော့ မင်းကိုယ်မင်းဒီလိုလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။”
“I want to sleep with you, Bill. I want you to hold me, and make love to me. I’ve never been made love to before. Take me to love, Bill”
Danny သူ့မြှူဆွယ်မှုနောက်သိပ်မပါလို့ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်အပြုအမူအပေါ်စိတ်ဝင်စားလာသလား တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားလို့ဒီလိုပြောတာလားမသိပေမဲ့ သူ့ဖီးလ်ကိုတော့ ခံစားလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ပြွန်ပုံသဏ္ဍာန် ရှည်ရှည်ထွားထွားဖောင်းကေားနေတဲ့ သူ့လီးကတော့ ကျွန်တော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ စိတ်အလွှာပါးပါး ကိုလာပြီး ဖောက်နေသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေ အဆက်မပြတ်ခုန်လာသလို Dannyအပေါ်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ပါဘူး။ ကောင်လေးရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာ၊ စိတ်နိုးကြွစေတဲ့စကားတွေပြောတာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာခြင်းပူးကပ်ထားမိတာတွေကြောင့်များလားမသိ။
Danny မျက်ဝန်းမှာ ရွှင်ပြတဲ့အရိပ်အရောင်တွေပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်ရှပ်အင်္ကျီ၊ဘောင်းဘီအတွင်းခံတွေ တစ်ခုခြင်းချွတ်နေတာကိုကြည့်ရင်းပေါ့။သူ့ကိုယ်က နည်းနည်းများတုန်နေရော့သလား ကျွန်တော်ဘောင်းဘီကို ဖြည်းဖြည်းဆွဲချွတ်တာကို ကြည့်ရင်းစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့လေ။ သူ့ဘက်ကို တိုးသွားရင်း လည်ပင်းကိုဆွဲယူ နှုတ်ခမ်းထိပြီး နမ်းစုပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကိုလွတ်ထွက်သွားမှာစိုးရိမ်သည့်အလား ဖက်တွယ် ထားတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရင်ခုန်သံ၊ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးကို ခံစားရယုံသာမက ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးရဲ့ Fresh meat ကလည်းကျွန်တော့်ပေါင်သားတွေနဲ့ ထိကပ်နေတာကြောင့် ပိုမိုထကြွလာတာ ကိုပါသိရှိ လာရပါတယ်။ နှစ်ဦးသားအနမ်းတွေဖလှယ်ရင်း အကြည့်တွေမှာ အဓိပ္ပာယ်တွေပိုလာကြသလိုပါပဲ။
သူ့အကြည့်တွေက အာခေါင်ကို ခြောက်သွေ့စေသလို ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာအောင်ထောက်ကူပေးပြန်တယ်။
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်က အမွှေးနုနုတွေကိုတို့ထိ ကစားရင်း”I want to be with you, Bill. No games. I want to you to fuck me.”လို့တဖွဖွပြောလာတော့ ကိုယ့်စိတ်တွေမထိန်းနိုင်ဖြစ်ရပြန်ပြီး သူ့ဦးခေါင်းကို ဆွဲယူနှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက်မိပြန်ပေါ့။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနူးညံ့လည်တိုင်တွေကို အဆက်မပြတ် နမ်းမိပြန်တော့မီးလျှံတစ်ခုလိုပူနွေးနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကလည်း အားကျမခံ ကျွန်တော့်ဘယ်လီသား၊ မျက်နှာအနှံ့နဲ့လည်တိုင်တွေကို အားကျမခံပြန်လည်ထိတွေ့တယ်လေ။
ရင်ခုန်သံတွေဟာ အဝေးပြေးရထားကြီး ဘူတာထဲကထွက်လာသလိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ပူနွေးနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊နှုတ်ခမ်းအစုံ၊ ပန်းသွေးရောင်အပေါက်လေးတွေ အားလုံးအားလုံးကိုလိုချင်တယ် လိုချင်တယ်ဗျာ အားလုံး။ အရသာပြင်းပြင်းပေးနိုင်တဲ့မရောင့်ရဲမတင်း တိမ်လောက်အောင်ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်စေတဲ့ သူ့ငပဲကိုလည်းရယူခံစားကြည့်ချင်တာပဲ။
Danny လေးဘက်ထောက်တိုင်လိုက်ပြီး ခုတင်ပေါ်တစောင်းထိုင်နေတဲ့ မတ်ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီး ပေါ်တက်ထိုင်ပြီးသွင်းဖို့ကျိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ အရင်လိုတာကြောင့်လားတော့မသိ အတွင်းသိပ်မ၀င်ဘဲ ချော်ထွက်နေလေရဲ့ မာထောင်နေတဲ့လီးကို တဆုံးထည့်ပြီး အားရပါးရဆောင့်ချင်နေပုံပါ။
“အစ်ကို့လီးကအရမ်းမာတာပဲဗျာ။”မိန်းမောတဲ့ပုံမျိးနဲ့ပြောတဲ့ သူစကားသံမှာ ဖီးလ်အရမ်းလာသလိုခံစားရပါတယ်။” So hard .So big. I want to feel it inside me.” “အရမ်းမာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ ၊ မင်းကအရင်လိုနေတာကိုး။ဖြည်းဖြည်းသက်သာပေါ့ကွာ၊မင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးဖီးလ်လာအောင် အရသာပိုရှိအောင် တစ်ခါမှမခံစားဖူးတာတွေခံစားဖူးအောင် ကိုယ်လုပ်ပေးပါရစေဦး။”လို့ပြောပြီး ဘေးတစောင်း လှဲလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ Danny လေ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကိုပွေ့ဖက်ပြီး သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို လှမ်းစုပ်လိုက်တာ အသည်းထဲအေးကနဲဖြစ်သွာရော။လီးထိပ်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းငုံ၊လျှာလေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းတို့ပြီး ငုံစုပ်လိုက်၊ ရွှေဥကိုငုံလိုက်နဲ့ပြုစုပေးနေတော့ pre-cum တောင်ထွက်ချင်သလိုဖြစ်မိပါရဲ့။ သူကလည်းဘေးစောင်းလှဲထားတာဆိုတော့ အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။
နူးညံ့ထွားကြိုင်းလှတဲ့ ဒင်နီရဲ့လီးကိုကိုင်ပြီး လျှောကနဲ့ စုပ်ယူလိုက်တော့ ဆတ်ကနဲ့တုန်သွားသလို “ဘယ်သူမှ ဒီလိုကောင်းကောင်းမစုပ်ပေးဖူးဘူး အား…အ” “Suck it all! Oh yeah, that feels so good.”
သူ့ရဲ့ဆီးခုံမှာရှိတဲ့မွှေးညှင်းနုနုတွေက ကျွန်တော့်ပါး၊စိုစွတ်နှုတ်ခမ်းတွေကို ကျီစယ်နေသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ လက်ဆတ်တဲ့ မွှေးပျံ့တဲ့ အနံ့တွေသင်းနေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း တုန်တုန်ရီရီနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အရင်းမှအဖျားထိလည်ချောင်းထဲအရောက်ထည့်လိုက် လျှာနဲ့ကစားလိုက် အလုပ်များနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကြောင့်ပါ။ သူ့ရဲ့delicious young cock ကိုကောင်းကောင်းစုပ်ပေးဖြစ်နေပေမဲ့ ပါးစပ်ထဲများsperm တွေထွက်သွားမလား စိုးရိမ်ရသေးတယ်။ ပေါင်သားနုနုလေးတွေကိုလည်း လက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းညင်သာပွတ်သပ်ပေးသလို ဘယ်လီသားလေးတွေ နောက်ပြီးရွှေဥတွေကို ငုံပြီးကစားပေး ဖြစ်တာကြောင့်ရောပေါ့ဗျာ။
သူ့ရွှေပန်းကိုငုံကစားနေရင်းက ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူ့ asshole ဆီသို့တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြီး လျှာနဲ့ ကစားပေးလိုက်တယ်။ ဒင်နီပက်လက်လှန်ပြီး သူ့ဒူးသူလက်နဲ့ပိုက်လိုက်တော့ သူ့luscious ass ကို အစွမ်းကုန်မြင်သာတဲ့ ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်း တောင်ပူစာနှစ်လုံးကြား ကတောင်ကြား လမ်းတလျှောက် တရွေ့ရွှေ့နဲ့ စမ်းရေပေါက်ရှိရာကိုလျှာနဲ့စမ်းစမ်းလာခဲ့တာ အပေါက်လည်းတွေ့ရော လျှောကနဲ့မြွေတစ်ကောင်တွင်းဝင်သလို ၀င်လိုက်တာပေါ့။ Danny တစ်ယောက် တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ဖီးလအရမ်းကောင်းသွားသလိုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော့်လျှာကို ဆက်လက်ငံ့လင့်နေလေတော့ လျှာကို လျှောကနဲ လျှောကနဲ ထိုးသွင်းလိုက် စည်းချက်မှန်မှန်၊နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုမွှေကစားလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုသွင်းလို့ အဆင်ပြေအောင်ပြင်ဆင်တော့ သူ့ခမျာအိပ်ယာခင်းတွေကို ဆွဲကိုင်ဆုပ်ယူပြီး ဖီးလ်အရမ်းမြင့်ကာ ပါးစပ်က”အား...အ....အ”ညည်းသံတွေနဲ့။
သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီးတော့ လှိုင်းကြီးလှေထိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုကိုင်ပြီးသွင်းကြည့်တော့ ခါရမ်းသွားတဲ့ ခေါင်းနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ဗိုက်ကို လက်နဲ့ပြန်တွန်းလိုက်ပြီး “Oh yes!” နာကျင်တဲ့အော်သံလား သဘောကျသံ လားမသိ အဲဒီလိုအော်တော့ ခပ်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်သွားရတာပေါ့ကျွန်တော့်မှာ။ “Christ, It hurts”လို့အော်ပြီး သူငိုမဲ့မဲ့လည်းဖြစ်သွားရတယ်။ ၈လက်မလောက်ရှိတဲ့လီးကိုတစ်ဝက်လောက်ထိထိုးသွင်းလိုက်တာကြောင့်ပါ။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဖင်ပေါက်ထဲဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းပြီး ဇကောဝိုင်းမွှေလိုက်တော့လည်း”Oh shit, that feels weird.”။
“နာလို့လား..... မင်းကိုဆက်မလိုးစေချင်လို့လား”လို့အကဲစမ်းလိုက်တော့ No တဲ့။Danny တယောက်လိုးတာကိုလည်းမရပ်စေချင်၊လီထည့်တော့လည်း နည်းနည်းနာ၊ ဒါပေမဲ့ ဖီးလ်အရမ်းလာတာကြောင့် လီးကိုဖင်ပေါက်ကမကျွတ်အောင် ကျွန်တော့်ခါးကိုခြေထောက်နဲ့ဆွဲချုပ်ထားပြီး”Weird is good. Keep it up. I fucking love it!”။
နှေးလိုက်မြန်လိုက် စည်းချက်မှန်မှန်လိုးလိုက် ဇကောဝိုင်းမွှေလိုက် Twist ကကလိုက် ကစားနေမိတယ်။ ပူနွေးရင်ခုန်ဖွယ်အထိအတွေ့များ၊တင်းကျပ်တဲ့ဖင်ကြွက်သားတွေရဲ့စုပ်အားကောင်းမှုကြောင့်ejaculation ဖြစ်တော့မလိုလိုတောင်ဖြစ်မိတော့တယ်။ “အစ်ကိုအထဲမှာ မပြီးလိုက်နဲ့နော်၊ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ပေါ်ပန်းထုတ်လိုက် အစ်ကို့အရည်တွေ နှုတ်ခမ်းပေါ်ပန်းတဲ့ဖီးလ်ကို ခံစားချင်တာဗျ။”လို့လှိုက်မောနွမ်းလျတဲ့အသံနဲ့Danny ကပြောတော့လည်းမထွက်သွားအောင်ထိန်းချုပ်ရင်း ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်သူ့မျက်နှာနားတိုးကပ်ပေးလိုက်တယ်။လက်ဖ၀ါးနုနုလေးတွေနဲပ ပွတ်သပ်ကိုင် နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ပြီး ရှေ့ထိုးနှောက်ငင်ကစားပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော့်မှာဖင်ကြွက်သားသာမက တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ယင်သွားပြီး piss-hole မှတဆင့် သုတ်ရည်တွေရေပြွတ်အလားပန်းထုတ်လိုက်မိပြီပေါ့။
ကောင်ချောလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ အရည်တွေ အပြည့် မလိုင်ဖတ်တွေအလား။ဒါတောင် ကောင်လေးက မကျေနပ်သေးဖူးထင်ပါရဲ့ လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုငုံထားပြီး အပေါက်လေးကိုလျှာနဲ့ကစားနေသေးတာ။ အရည်တွေကို တစ်စက်မကျန်လျှက်နေလိုက်တာ လီးတစ်ချောင်းလုံးတောင် ခြောက်သွေ့သွားသလိုပဲ။
ခပ်ကားကားဖြစ်နေတဲ့ Danny ပေါင်ကြားထဲမှာပဲထိုင်ချလိုက်ရင်း သူဂွင်းထုတာကိုစောင့်ကြည့်မိတယ်။ ငယ်ရွယ်ပြီး အရမ်းSexy ဖြစ်တဲ့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ လက်ညှိုးလေးနဲ့ သူ့အပေါက်ထဲအထုတ်အသွင်းပြုရင်းဖီးလ်ပိုရှိအောင်ကူညီဖြစ်ပါတယ်။ ညင်ညင်သာသာလေးပွတ်သပ်လိုက် အတွင်းထဲကိုထိုးထည့်လိုက် ခပ်သွက်သွက်လေးထိုးသွင်းလိုက်နဲ့ လက်ညှိုးကစားပေးနေတော့ ငါးမိနစ် လောက်လည်းကြာရော ရုတ်တရက် တစ်ကိုယ်လုံးတောင့်တင်းသွားတဲ့အပြင်ဖင်ကြွက်သားတွေကလည်း သွင်းထားတဲ့ လက်ညှိုးကိုဖျစ်ညှစ်ကာသူ့အမြှောက်ကနေ အမြှောက်ဆံဖြူဖြူတွေ ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရင်ဘတ်တွေ ဗိုက်သားတွေပေါ်မှာ အများအပြားပါပဲ အရည်ကြည်တွေ။
လှမ်းဖက်တဲ့ လက်အစုံကညင်ညင်သာသာ ပြီးတော့ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ခပ်ဖွဖွနမ်းတယ်။ သူ့လျှာကိုထိုးသွင်းလိုက်တော့ ငံကျိကျိအရသာတစ်မျိုးကို ခံစားလိုက်ရသေးတယ်။သည်းသည်းမည်းမည်း မိုးနဲ့အတူ အပြိုင်ကျဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ညလေးပေါ့ဗျာ။
ရေးသားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းလေးက ၁၄နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူ နေနေကြပါပြီလေ။ Business trips အတွက်ခရီးရှည်ထွက်တိုင်း Danny လည်းမကြာခဏ လိုက်ပါလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဒီလိုမိုးသည်းညတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။
နှစ်ဦးသား ကံကောင်းစွာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်ကို သတိတရဖြစ်စေလို့ပါပဲ။
ရင်ခုန်ဖွယ်အထိအတွေ့တွေဟာလည်း ပူနွေးဆဲ နှစ်ဦးသားချစ်ခင်စွဲလမ်းမှုကလည်း မလျော့ဘဲ တိုး၍ချည်နှောင်ဆဲပါ။ ချစ်သူဆိုတာထက်သာတဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာ....။
Posted by Alex Aung at 8:50 PM 1 comment:
The Long Hard Drive (1)
မိုးမှောင်မှောင် ညမှောင်မှောင်မှာ ကားအနက်ရောင်မောင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကားမောင်းလာရတာကြောင့် အထီးကျန်နေ ရတဲ့အထဲ မိုးကလည်း သည်းကြီးမည်းကြီးဆိုတော့စိုစိုစွတ်စွတ်နဲ့ စိတ်ဒုက္ခ ရောက်လိုက်ရတာမပြောပါနဲ့တော့။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခရီးဆိုတော့လည်း သွားရတာပေါ့ဗျာ။ ခရီးရှည်ကိုတစ်ယောက်တည်း ကားမောင်းထွက်လာသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်မသိသူလူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ကားကြုံတင်စီးဖို့ ဆိုတာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်ပေမဲ့ ကောင်ငယ်လေး တစ်ယောက် ကို ကားကြုံတင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။မိုးတွေသည်းနေတဲ့ လမ်းဘေးမှာ တစ်ယောက် တည်းမိုးခိုနေတာဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့တင်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ကားပေါ် မရောက်ခင် အထိတော့ သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို သေချားမသိခဲ့ရပေမဲ့ ကားပေါ် ရောက်လို့ စိုစွတ်နေတဲ့အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီတွေ၊အိတ်တွေကိုဖယ်ရှား လိုက်တော့မှ ကားပေါ်ကို ဆယ်ကျော်သက်ကောင်ချောလေး ရောက်လာမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။
ခရီးရှည်ကြီးကို စတင်မောင်းထွက်လာတုန်းကတော့ ဖုန်းမောင့်တစ်ကိုယ် တည်းဆိုတော့ သီချင်းသံကလွဲလို့ ကားပေါ်မှာ အထီးကျန် ရင်ခုန်သံလည်း ငြိမ်လို့ပေါ့။ အခုချိန်မှာတော့ ရင်ခုန်သံစဉ်တွေလှုပ်ရှားဖို့ ပူနွေးလာပြီထင်ပါရဲ့။ နုပျိုတဲ့သွေးသားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက် ရတာတော်တော်လန်းတယ်ဗျ။လတ်ဆတ်တဲ့ အတွေးအခေါ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အမြဲတန်းသွက်လက်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လူငယ်တွေ ကို Every time Welcome ပေါ့ဗျာကျွန်တော်က။ ကိုယ်ခန္ခာပေါ်က စိုရွှဲနေတဲ့ မိုးရေစက်တွေကြောင့် ကိုယ်ကာယအလှကိုတမင် လှစ်ပြသလို ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဂျင်းဘောင်းဘီစိုစိုကလည်း သူ့ပေါင်ကြားကဖုဖုဖောင်းဖောင်း Fresh meat ကလည်း ဆွဲကိုင်ချင်စရာကောင်းအောင် ကောက်ကြောင်းပေါ်နေပြန်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်ဖိုနေမှန်းသတိထားမိတော့ ကောင်လေးမသိအောင်ထိန်းရင်း မိတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တယ် “ မင်းဘယ်သွားဖို့လုပ်နေတာလည်းကွ ကောင်လေး” တိတ်ဆိတ်နေတာကို ဖြိုခွင်းတဲ့အနေနဲ့ရောပေါ့။ “အထူးတလည်မရှိပါဘူး”တဲ့ တစ်ခုခုကိုနားလည်နေတဲ့အပြုံးမျိုး နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။ “ကျွန်တော့်ကို ခေါ်လာလို့ အစ်ကို့အတွက် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်၊ အပန်းမကြီးဘူးမဟုတ်လား”။ အင်း....သိလိုက်ပါပြီ အခုမှတွေ့သူ လူစိမ်းကို ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပြောဖို့ စိတ်မပါသူလေးဆိုတာ။
နာရီဝက်လောက် ဆက်မောင်းလာပြီးတဲ့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ဟာနေ တဲ့ဝမ်းကိုဖြည့်ဖို့ ဘာဂါဆိုင်ရှိရာဦးတည်လိုက်တယ်။ ကောင်လေးကြည့်ရတာ ပိုက်ဆံအများ ကြီးပါပုံမပေါ်ဘူး။သူ့ရှယ်ယာအတွက် ကျသင့်ငွေကို မသိမသာ ရေတွက်နေလို့လေ။ “ဟေး ဒါ့အတွက် ကျသင့်ငွေကို ကိုယ်ရှင်းမှာပါ ၀အောင်သာစား”လို့ပြောလိုက်မိတယ် သူလေးဗိုက်ဝပါစေပေါ့။သူကလည်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ပိုက်ဆံကိုအလျှင်စလိုပြန်ထည့်ပြီး “ကျေးဇူး..တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ”။
ညစာစားပြီးတာနဲ့ ညကလည်းနက်ပြီဆိုတော့ အနားယူဖို့အားအင်ဖြည့်ဖို့ ကားရောလူရော တစ်ညတာခိုဖို့ မိုတယ်မှာ အခန်းငှားလိုက်တယ်။ ခရီးသွား ဖော်အသစ်ကလေးကို တစ်ခန်းတည်းအတူတည်းပြီး အနားယူဖို့ကမ်းလှမ်း တော့ သူကလည်းချီတုံချတုံဖြစ်မနေဘဲ “အိုကေ”ဆိုပဲ။
အခန်းထဲပစ္စည်းတွေ နေရာချ၊ အားလုံးပြီးလို့ကောင်လေး တီဗွီကြည့်နေတုန်း ကျွန်တော်ရေအရင်ချိုးလိုက်တယ်။ တစ်နေကုန်မောင်းလာတော့ တစ်ကိုယ် လုံးလည်း ညည်းစီစီနဲ့အနံ့အသက်ကလည်းမကောင်းဆိုတော့ ရေနွေးလေးနဲ့ စိမ်ပြီအညောင်း ဖြေရေအရင်ချိုးလိုက်တာ။ရေချိုးဇလုံထဲမှာစိမ်နေရင်း မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ အတွေး အာရုံထဲမှာ ကောင်လေးရဲ့ ကိုယ်ခန္ခာပုံရိပ်တွေ ကို မြင်ယောင်နေမိတယ်....သူ့ရဲ့ဘော်ဒီ ကဘယ်လို နူးညံ့တဲ့နှုတ်ခမ်းလေး တွေက...အား.....အဲဒီနှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ကိုယ့်ငထွား ကိုပြုစုပေးရင် ကောင်းမှာ။ပြီးတော့ ဒီကောင်လေးရဲ့ လီးကရောဘယ်လိုရှိမလဲ ဆပ်ပြာတိုက် ရင်း အာရုံယူနေမိပြန်တယ်။ ရယ်စရာဖြစ်နေပြီ လားမသိပါဘူးဗျာ....ဟား ဟား။
သူရွေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်ကို ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေတုန်း ရေထချိုး လေရဲ့။ မွေ့ယာပေါ်မှာလူးလိမ့်ရင်းအမှတ် မထင်ခေါင်းအုံးကိုဆွဲယူလိုက်တော့ စတန်းပေါ် တင်ထားတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ပိုက်ဆံအိပ်တင်ထားတာကို သတိထား မိတယ်။ လယ်သာပိုက် ဆံအိတ်လေးကိုဖွင့်ကြည့်မိတော့ ကားဒရိုင်ဘာလိုင်စင် First name - Daniel အသက်က၁၈နှစ် ပြီးတော့ Ohio နယ်မှာတစ်ခါမှမကြား ဘူးတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ကပဲ။ဒါဆို သူဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလည်း၊ လမ်းမပေါ် မှာ တစ်ယောက်တည်း ကားကြုံစီးတာက Iowa မှာ။ ပိုက်ဆံအိတ်ကို တွေ့ခဲ့တဲ့ နေရာမှာပဲမြန်မြန်ထားလိုက်ရတယ်။ တဘက်တစ်ထည်ကိုယ်မှာ ပတ်လို့ အနည်းငယ်ရှက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ရေချိုး ခန်းထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောင် ကလေး ကြောင့်ပေါ့။
“အ၀တ်အစားတွေအားလုံး မိုးစိုကုန်လို့လျှော်ပြီးလှန်းထားလိုက် တယ်ဗျ၊ ပြီးတော့ ၀တ် စရာအပိုလည်းမပါလို့ ဒီအတိုင်းနေတာ အစ်ကိုစိတ်မရှိပါ ဘူးနော်....။”ဒီကောင်လေး ဒီလိုတော့လည်းယဉ်ကျေးပြီး သိတတ်နား လည်သူပါပဲ။ “သြော်..ရပါတယ်၊ သက်သောင့် သက်သာဖြစ်အောင်သာနေ အေးဆေးပေါ့။” သူနေသာအောင် အလိုက်သင့်ပြော လိုက်ပေမယ့် ဒီလိုမြင်ကွင်း မျိုးမြင်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောမပြတော့ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ တော့ တော်တော်ကြည့်ကောင်းသားပေါ့။ “စကားမစပ် ကိုယ့်နာမည် Bill ပါ။”
ကောင်လေးက သူ့လက်ကိုအလိုက်သင့်ဆန့်ထုတ်ပေးရင်း”လူတိုင်းကတော့ Danny လို့ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီညအစ်ကို ကျွန်တော့်ကို ကူညီခဲ့တာ အားလုံးအတွက် တကယ့်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဗျာ။ မိုးရေထဲမှာ တစ်ညလုံးနေရရင် တော့သွားပြီလို့ စိုးရိမ်နေခဲ့တာဗျ။”
စကားပြောဆိုပြီးတော့လည်း အေးအေးသက်သာအနားယူဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တီဗီ အစီအစဉ်တွေပြောင်းကြည့်ရင်းပေါ့။ ကောင်းလေးက ခုတင်တစ်ဖက်ခြမ်း မှာလှဲလျောင်း ပြီးကြည့်နေလေရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဘက်ခြမ်းနံရံကိုမှီရင်း ရှုစားရတာပေါ့လေ အားလုံး...ဟီး..ဟီး။ ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လည်းပြီးရော Channel ပြောင်းဖို့ တီဗီရှိရာကိုလှမ်း သွားရပါတယ် တီဗီက အခန်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်မှာဆိုတော့ Remote နှိပ်တာ အဆင်မပြေတော့လေ။ နည်းနည်းလောက်ခြေလှမ်းလိုက်ရုံရှိသေး သူ့ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်က လျောကနဲ ခြေရင်းမှာပုံသွားပါလေရော။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက အသဲနှလုံး တွေ လည်ချောင်းထဲခုန်တက်လာသလားအောက်မေ့ရတယ်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ တဒိန်းဒိန်း ဖြစ်အောင် တစ်တစ်ရစ်ရစ်နဲ့ဝိုင်းစက်နေတဲ့ တင်ပါးဆုံတွေ၊ ကျစ်လစ်သွယ် လျတဲ့ ပေါင်တံ တွေက မြင်ကွင်းထဲမှာ ထင်းကနဲဆိုတော့။
မြင်ပြီးပါပြီ သူ့လိင်တံထွားထွားကို တဘက်ကိုကုန်းကောက် ရှေ့ပိုင်း ကိုမလုံ့တလုံဖုန်းရင်း ကျွန်တော့်ကိုတောင်းပန်ချိန်မှာပေါ့။ “ကန့်ကွက်စရာ မရှိဘူးမဟုတ်လားဗျ... ကျွန်တော်ဒီ တဘက်ကို ပတ်မထားချင်တော့ဘူး စိုထိုင်းထိုင်းနဲ့နေရတာ သက်သောင့်သက်သာကို မရှိလို့..ရတယ်နော် အစ်ကို။”လို့ Danny ကပြောရင်းခါးက တဘက်ကိုအ၀တ်ဟောင်း ခြင်းထဲ ထည့် အိပ်ရာပေါ်မှာ သူ့တံတောင်ဆစ်ကိုပြန်အုံးရင်းလှဲလေရဲ့။
သူ့ရဲ့over-sized လီးကြီးကရွှေဥတွေပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းလှဲလျောင်းနေတာများ ငြိမ်ဝပ် လို့။ “အစ်ကို့ကို ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုလောက်တောင်းမလို့၊ ကျွန်တော်ပြောမှာက ထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းတော့မဟုတ်ဘူး.. တစ်ခြားအတွေး တွေလည်းမတွေး မထင်မြင် စေချင်ဘူး။”
“သေချာတာပေါ့၊ကိုယ်မင်းကို ကတိပေးပါတယ်။မင်းဘာကို သိချင်လို့လည်း။”
“ကျွန်တော့်လီးက ကြီးတယ်လို့ အစ်ကိုမထင်ဘူးလား။” ဟုတ်တယ် သူ့လီးက ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လူငယ်တွေကြားမှာတော့ အထွားဆုံးဖြစ်မယ်။ မြင်ဖူးသမျှထဲမှာလည်း အလှဆုံးလို့ဆိုရမယ်။ “ကိုယ်ပြောနိုင်တာကတော့ ကောင်မလေးတွေကြိုက်မယ့် ဆိုဒ်ပဲကွ...ဟား...ဟား။”
“မိန်းကလေးတွေပဲကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကျွန်တော် လူတစ်ချို့နဲ့ရှုပ်ဖူး ပါတယ်။ တစ်ယောက်လီး တစ်ယောက်စုပ်၊အပြန်အလှန်ဂွင်းထုပေးကြပေါ့။ ပြီးတော့ တစ်ခြား တစ်ယောက်ဂွင်းထုတာကို ကြည့်ရင်လည်း ကျွန်တော် လီးတောင်မိတယ်ဗျ။”သူ့ဝန်ခံ ချက်တွေလား စိတ်ကြွအောင်ပြောတာလား မသိပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်မိသား။
“မာတောင်နေတဲ့လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရတာကို ကြိုက်တယ်ဗျ။ လီးတုတ်ရင်ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်။ ဆုပ်ကိုင်ထားတုန်းလက်ထဲမှာ ပူနွေးနေတာ ဖီးလ်ပဲဗျာ။ ကျွန်တော်နဲ့ရှုပ်ဖူးတဲ့ လူတော်တော်များများက ဂလက်မကျော်တဲ့ ကျွန်တော့် လီးကိုကြိုက်ကြတာချည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဖင်ကလည်း Good တာပဲမဟုတ်လား။”
Danny သူကျွန်တော့်ရှေ့ ကိုလာပြီး တစ်ရစ်ဝိုင်းစက်လှပတဲ့ သူ့တင်ပါးတွေကို ခပ်ရမ်းရမ်းလေး လှုပ်ပြရင်းဆိုလေ တော့ ပြန်ဖြေဖို့ချီတုံချတုံဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်၊ တုံ့ပြန်စကားမဆို နိုင်လောက် အောင် သူ့ကစွမ်းလိုက်ပုံများ တကယ့်ကို ကျွန်တော်.......။
ညီညာပြန့်ပြူးနေတဲ့ ခုတင်ကျယ်ကြီးပေါ်ဘေးတစောင်းလှဲရင်း ရှည်လျားသွယ် ပြောင်း တဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ တင်ပါးဖြိုးအိအိတွေကိုပွတ်သပ်လိုက်၊ ပန်းသွေးရောင် အပေါက် ကနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပွတ်လိုက်ဖြဲကားပြ လိုက် တို့ထိကစားပြရင်း “ကျွန်တော် လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖူးတယ်၊သူ့တို့ကို လီးတောင်လာအောင်စိတ်ပါလာအောင်လုပ်ပြ ၊ လိုးခိုင်းမလိုလိုနဲ့ မြူဆွယ်ခဲ့တယ်...ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုမလုပ်ခိုင်းခဲ့ဘူး (သူတို့ဘယ်လောက် တောင်းဆိုဆို) ဟီး..ဟီး။”
အခန်းအပူချိန်ရုတ်တရက် ပိုမြင့်သွားသလားထင်ရခံစားရ သလိုမျိုး တစ်ကိုယ်လုံးသွေး လည် ပတ်မှုမြန်လာသလိုဘောင်းဘီကြားက ကျွန်တော့် လီးထွားထွားကလည်း ထိန်းချုပ်မရ အောင် ဒေါသပုန်ထကြွလာလေရဲ့။ သူပြောနေတဲ့နိုးထစေတဲံစကားတွေကြားရတာပြီးတော့ finger-fucking လုပ်ပြနေတာကြောင့်ရော... ပေါ့...ရှီး...အား...အ။
Posted by Alex Aung at 8:32 PM No comments: